Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalka | Gobolka » Jamaica » Jamaica si ay Isbaanishka ula saxiixato MOU cusub oo ku saabsan Horumarinta Dalxiiska
Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett (bidix) ayaa wada hadal la yeelanaya Wasiirka Warshadaha, Ganacsiga iyo Dalxiiska ee Isbayn, Hon. Reyes Maroto, oo ku taal FITUR, bandhigga socdaalka caalamiga ah ee sannadlaha ah ee ugu muhiimsan adduunka, oo hadda ka socda Madrid, Spain. Kulanka ayaa waxaa ka soo baxay is afgarad lagu soo saarayo is-afgarad ku aaddan iskaashiga dhinacyada kala duwan ee horumarinta dalxiiska. -Sawirka waxaa iska leh Wasaaradda Dalxiiska ee Jamaica
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ayaa ku dhawaaqay in Jamaica iyo Spain ay sameyn doonaan heshiis isfaham si ay isaga kaashadaan dhinacyada kala duwan ee horumarinta dalxiiska iyo isbeddelka dhaqaalaha.
Ku dhawaaqista ayaa daba socota kulan uu la yeeshay Wasiirka Warshadaha, Ganacsiga, iyo Dalxiiska Spain, Hon. Reyes Maroto, horraantii maanta, FITUR, oo ah bandhigga safarka caalamiga ah ee sanadlaha ah ee ugu muhiimsan adduunka, oo hadda ka socda Madrid, Spain. Marka laga soo tago Jamhuuriyadda Dominican, oo ah Waddamada Iskaashiga FITUR ee sanadkan, FITUR waxay isu keentaa ku dhawaad ​​boqol waddan oo leh toddobaatan wakiil oo rasmi ah.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan taas ku dhawaaqo Jamaica Spain waxay sameyn doontaa heshiis is afgarad ah oo ku aaddan iskaashiga dhinacyada kala duwan ee horumarinta dalxiiska. Aniga iyo wasiir Morato waxaan maanta yeelanay doodo ballaaran oo ku saabsan dhinacyada kala duwan ee soo kabashada iyo dib u soo celinta dalxiiska oo horseed u ah kobaca dhaqaalaha iyo isbeddelka,” ayuu yiri Bartlett.
"Waxaan ka wada hadalnay doorka Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay oo ah hay'ad muhiim u ah xaqiijinta codsiyada tacliimeed iyo kuwa la taaban karo ee lagama maarmaanka u ah dib-u-cusboonaysiinta dalxiiska cusub taas oo u sahlaysa waddamada yaryar iyo ciyaartoyda yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah inay helaan waayo-aragnimo dheeraad ah oo loo siman yahay iyo soo kabashada. in badan oo ka mid ah dakhliga lumay,” ayuu raaciyay.
Jamaica waa hoggaamiye fikradeed.
Bartlett waxa kale oo uu fursad u isticmaalay in uu ku casuumo Wasiir Morato maalinta u adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah ee Jamaica, oo loo qorsheeyay Febraayo 17-keeda, 2022, Bandhigga Adduunka ee Dubai. Maalintan ayaa diiradda lagu saari doonaa awoodda waddamadu u leeyihiin in ay dhistaan ​​awoodda ay uga jawaabaan jahawareerka caalamiga ah iyo kuwa caalamiga ah iyo in ay awood u yeeshaan in ay si dhab ah u saadaaliyaan jawaabahooda. Waxa kale oo ay ka caawin doontaa wadamada fahamka iyo yaraynta saamaynta naxdinta leh ee horumarkooda, laakiin tan ugu muhiimsan, waxay ka caawin doontaa inay maareeyaan oo ay si dhakhso ah uga soo kabtaan shoogyadaas ka dib.
"Jamaica runtii waa hogaamiye fakar ah oo ku sugan aaggan, waxaana naga go'an inaan la shaqeyno dhammaan shuraakadayada si aan u dhisno adduun xoog badan, waxtar badan, oo adkeysi leh oo si fiican uga jawaabi kara naxdinta iman doonta inta aan ku sii jirno safarkan nolosha. "ayuu yiri Bartlett.
Jamaica Ururka Adkeysiga HBS Spain Dalxiiska Qaramada Midoobay Ururka Dalxiiska Adduunka
Israa'iil waxay u furan tahay dalxiisayaasha la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin...
Suuqa Qaybaha Waxqabadka Baabuurta ayaa la filayaa inay...